Global Voices sy UNESCO hiaraka hiasa hamorona fitaovana fikatrohana nomerika ho fampiroboroboana ny fiteny ety anaty tambajotra · Global Voices teny Malagasy
Loharanom-pahalalana ikendrena hanampiana ny fikatrohana nomerika hisian'ny hamaroam-piteny anaty tambajotra
Voadika ny 10 Marsa 2021 16:33 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, русский, Español, Français, Português, Ελληνικά, Esperanto , عربي, English
Amin'ny alàlan'ny hetsika Rising Voices ato aminy, ny Global Voices dia faly milaza aminareo ny fiarahana miasa vaovao amin'ny UNESCO ho famokarana fitaovana fanabeazana misokatra ho an'ireo Vazimba Teratany sy ireo vondrompiarahamonina hafa mampiasa fiteny vitsy an'isa na tsy misy mpanohana ka mikatsaka ny hiditra ao anatin'ny media nomerika sy hampiasa ireo fitaovana voatahiry ao anaty aterineto amin'ny hetsika ataony ho fampahafantarana ny fitenin-dry zareo.
Araka ny Fanambaràn'ny Firenena Mikambana momba ny Zon'ireo Vazimba Teratany, iray amin'ireo fepetra fototra ho amin'ny fizakantena tanterak'ireo mponina teratany ny zo ho afaka maneho hevitra an-kalalahana sy hahazo torohay amin'ny fitenin-dreniny. Ny fitahirizana ny fahaveloman'ireo fiteny teratany dia ahafahana mitahiry sy miaro ireo fahalalàna nentindrazana, izay mazàna no miseho amin'ny endrika lovantsofina, ary mandritra izay fotoana izay ihany koa dia ahafahana mitahiry ireo kolontsaina sy maripanondroana an'ireo vondrompiarahamonina vazimba teratany.
Tsy natao ho torolàlana ho arahana isan'andininy ilay fehezam-pitaovana; fa, hanome tondrozotra ho an'ny asa fikatrohana nomerika izay hiarahana mamorona miaraka amin'ny fiarahamiasa akaiky amin'ireo tambajotra-na mpikatroka efa misy sy vaovao, ary ireo mpiara-mitantsoroka hafa, raha mitohy kosa ny fanomanana ny Taompolo iraisampirenena natao ho an'ireo fiteny teratany 2022-2032.
Tamin'ny famoronana ity loharano ity ho an'ireo mpikatroka nomerika efa misy sy vao mipongatra, ny fifanomezan-tànan'ny Global Voices sy ny UNESCO dia mamaly ny fandrisihana iray voalaza tao anatin'ny Los Pinos Declaration [Chapoltepek] nomanina nandritra ny lanonam-pamaranana faratampony ny hetsiky ny UNESCO tamin'ny 2019- Taona Iraisampirenena ho an'ireo Fiteny Teratany: